Comedian Anne Kansiime Cracks Zimbabwe Fans - HowweBiz.UG
Comedian Anne Kansiime Cracks Zimbabwe Fans
Marriet in Entertainment
Local female comedian Anne Kansiime has done it again after pulling over 3,700 Zimbabweans to the Harare International Conference Centre over the weekend to watch her do what she knows best; making people crack their ribs with laughter.
According to Zimbo Jam, a Zimbabwean media outlet, Kansiime proved to know Zimbabwe way too well that she even joked about prominent a business man and social media poser Sir Wicknell, calling him ‘Sir Weakness’ and checked if Stunner was doing well after his car accident, something that pulled the Zimbabweans love her even more.
Kansiime was indeed overwhelmed with joy and excitement from the love and support the Zimbabweans showed her as she thanked them on her social media, “Zimbabwe Zimbabwe Zimbabwe, Home away from home” she posted.
The 30-year-old comedian has proved to be the best in the game following her successful tours in Zimbabwe, Malawi, Rwanda and Botswana and recently being named one of the 100 most influential Africans by the African Youth Awards.
Anne Kansiime Zimbabwe